काँग्रेस नेतासहित १० जनाको सामुहिक हत्या, प्रहरी घटनास्थल पुग्दै ? — Imandarmedia.com
काँग्रेस नेतासहित १० जनाको सामुहिक हत्या, प्रहरी घटनास्थल पुग्दै ?
एजेन्सी। भारतको पश्चिम बंगालमा एकैदिन १० जनाको हत्या भएको छ। आज साँझ बिरभूम जिल्लाको रामपुरहाट क्षेत्रमा अज्ञात व्यक्तिहरुले तृणमूल काँग्रेस पार्टीका चर्चित एक नेतासहित बोक्तइ गाउँका उपप्रधान भादु शेखको हत्या गरेपछि उनका समर्थकले हुलदंगा गरेका थिए।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबारे सार्वजनिक भएको एउटा खबरले भारतमा हल्लीखल्ली मच्चाएको हो। इमेल द्वारा दिइएको धम्कीमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई जसरि भएपनि सिद्द्याउने भनिएको छ।
तेस्तै, भारतीय राज्य उत्तराखन्डमा पुस्कर सिंह धामी फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन्। चुनाव पराजयपछि पनि उनी उत्तराखन्डको मुख्यमन्त्री बन्न लागेका हुन्। मार्चको दोस्रो साता सार्वजनिक भएको विधान सभा निर्वाचनमा धामी कंग्रेसका उम्मेदवारसँग पराजित भएका थिए।
कंग्रेस उम्मेदवार भुवन चन्द्र काप्रीसँग ६ हजार ५७९ मतअन्तरले पराजित भएपछि ११ मार्चमा धामीले मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तेस्तै,नेपाल–भारत छुट्याउने दार्चुलाको सीमा क्षेत्र महाकाली नदी किनारमा भारतले एकतर्फीरूपमा आफूखुसी तटबन्ध गर्न थालेको छ।
भारतले पहिलेको तटबन्धभन्दा ९ मिटर वरै नेपालतर्फ सीमा रहेको महाकाली नदीको पानी नेपालतर्फ धकेलिने गरी तटबन्ध बनाउन थालेको हो। भारतले आफ्नो पुरानो तटबन्धभन्दा नेपालतर्फ १ मिटर वरै पुनः जेसिवी चलाएर तटबन्ध गर्नका लागि फाउण्डेसन तयार गरिरहेको छ।
उनले भने, महाकाली नदीलाई भारतले आफ्नोतर्फको जमिनमा ड्याम बाँधेर तटबन्ध गरिँदा नदी साँघुरिने भई त्यसले नेपालतर्फको भू–भागमा क्षति पुग्ने निश्चित छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ।